Soosaarayaasha ugu Wanaagsan Doomaha Wareegtada iyo Warshad | Ningxin
Doonta semicircular graphite
Doonta garaafka lafteedu waa nooc xambaara, kaas oo gelin kara alaabta ceeriin iyo qaybaha aan u baahanahay inaan isugu dhejino ama isku qaabeyno si ay u shiraan heerkul sare. Doonta garaafku waxay ka samaysan tahay garaaf macmal ah iyada oo loo marayo farsamaynta farsamada. Markaa waxaa mararka qaarkood loo yaqaannaa garaaf doon, marna waxaa loo yaqaan 'garaafid doon'.
Wareega kala badh Graphite waxaa badanaa loo isticmaalaa foornooyinka kala duwan ee faaruqinta, foornooyinka induction, foornooyinka sintering, foornooyinka brazing, ion foornooyinka nitriding, foornooyinka dhalaalaya tantalum-niobium, foornooyinka demiya, iwm.
Doonta garaafyada laba jibbaaran
Doomaha garaafka ee shirkaddeenu waxay taageertaa wax soo saarka qaabaysan. Doomaha Graphite waxay leeyihiin astaamaha u adkaysiga heerkulka sare, iska caabinta daxalka, caabbinta shoogga kuleylka iyo iska caabbinta.
Qalajinta doonta garaafka wareega
1. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho foorno leh waqti shaqeed iyo qiiqa wareega, sidaas darteed uumiga si toos ah ayaa loo shubi karaa si looga fogaado in uumiga aan la siideyn karin isla markaana caqabad ku noqon karin qalajinta geedka garaafka.
2. Nadiifinta ka dib, doonta garaafka waa in hawo lagu shubo ama la engejiyaa ugu yaraan muddo ah si loo hubiyo inaysan jirin wax dhibco biyo ah ama calaamado biyo ah dusha sare ee doonta, ka dibna lagu rido foornada. Ha dhigin garaafka garaafka ee hadda la nadiifiyey si toos ah foornada.
3. Deji heerkulka foornada 100-120 darajo Celsius, waqtiga orodka iyo waqtiga qabashaduna waa 10-12 saacadood. Muddo qalalan oo go'an ayaa lagu go'aamin karaa iyadoo lagu darayo wareegga wax soo saarka.
Dayactirka doonta garaafka
1. Kaydinta doonta garaafka: garaafka garaafka waa in lagu keydiyaa jawi qalalan oo nadiif ah. Qaab-dhismeedka ka dhexeeya garaafka laftiisa dartiis, waxay leedahay heer xayeysiis gaar ah. Jawiga ama jawiga wasakhaysan ayaa ka dhigi doonta garaafka doonta nadiifinta iyo qallajinta fududahay in mar labaad la wasakheeyo ama qoyan.
2. Qaybaha dhoobada iyo garaafka ee qaybaha garaafka garaafku dhammaantood waa maaddooyin jilicsan, waana in laga fogaadaa inta la qabanayo ama la isticmaalayo; haddii qaybaha la ogaadey inay jajaban yihiin, dillaaceen, dabacsan yihiin, iwm, waa in la beddelaa oo dib loo xiraa waqtiga.
3. Beddelida farsamada garaafka dhibcaha ku dhegan: Marka loo eego soo noqnoqoshada iyo waqtiga isticmaalka, iyo aagga hadhka dhabta ah ee batteriga, dhibcaha doonka garaafka ee ku dheggan waa in si xilliyo ah loo beddelaa.
4. Waxaa lagu talinayaa in doomaha garaafka lagu tiriyo maareynta lambar, oo nadiifinta joogtada ah, qalajinta, dayactirka, iyo kormeerka ay tahay in lagu sameeyo, ayna maareeyaan shaqaale gaar ah; si loo ilaaliyo xasiloonida maamulka iyo isticmaalka doomaha garaafka. Doonta garaafka ee guud ahaan la nadiifiyo waa in si joogto ah loogu beddelaa qaybaha dhoobada.
5. Markay garaafka garaafka la dayactirayo, waxaa lagu talinayaa in qaybaha, doomaha doonnida iyo geeddi-socodka dhibcaha ku xayiran uu bixiyo bixiyaha garaafka garaafka, si looga fogaado waxyeello inta lagu jiro howsha beddelka sababtoo ah karti la'aanta qaybta saxda ah ee u dhiganta doon asal ah
Hore: Doonta garaafyada laba jibbaaran
Xiga: Caaryada Graphite for shubay joogto ah
Doonta Semi-Wareegga Garaafka
Doonta Garaafka Semi-Wareegga ah
Doonta Garaafka Labaad
Weelka Kaarboon Garaafka, Iskuduwaha Garaafka, Doonta Garaafka Semi-Wareegga ah, Qaybaha Dayactirka Graphite, Garaafka Sawirka, Doonta Garaafka Labaad,